इरान विमान दुर्घटनाः इरानी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट युक्रेनी विमान खसेको प्रमाण भेटिएको पश्चिमा देशको दाबी – Mero Pradesh TV
meropradeshtvJanuary 10, 2020
इरानी क्षेप्यास्त्रका कारण युक्रेनको एउटा यात्रुवाहक विमान बुधवार तेहरानमा दुर्घटनाग्रस्त भएको सङ्केत उपलब्ध प्रमाणले गरेको पश्चिमा देशका नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्रुटिवश त्यसो भएको हुन सक्छ।
क्यानडा र युकेका नेताहरूले उक्त विमान दुर्घटनाको सम्बन्धमा पूर्ण र विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। दुर्घटनामा विभिन्न देशका १७६ नागरिकको मृत्यु भएको थियो।
तर इरानले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार नभएको भन्दै त्यस्तो दाबीको खण्डन गरेको छ।
इरानी सरकारका एक प्रवक्ताले पश्चिमा देशले लगाएको आरोपप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्।
के छ अनुमान?
विमान दुर्घटनामा मारिएकाहरूमा ८२ जना इरानका, ६३ जना क्यानडाका र ११ जना युक्रेनका नागरिक थिए। स्वीडेन, यूके, अफगानिस्तान र जर्मनीका यात्रु पनि उक्त विमानमा थिए।
सीबीएस न्यूजले अमेरिकी गुप्तचर स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार एउटा भूउपग्रहले दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रहारको र एउटा विस्फोटको इन्फ्रारेड तरङ्ग ‘ब्लिप’ देखिएको पत्ता लगाएको छ।
यसैबीच न्यूजवीकले पेन्टागन र एक वरिष्ठ अमेरिकी गुप्तचर अधिकारी तथा एक इराकी गुप्तचर अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै युक्रेन इन्टर्न्याशनल एअरलाइन्सको उक्त विमानमा रुसमा निर्मित टोर क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको हुन सक्ने विवरण प्रकाशित गरेको छ।
न्यूयोर्क टाइम्सले प्राप्त गरेको भिडिओमा तेहरानमाथि राति आकाशमा क्षेप्यास्त्रको उज्यालो अघि बढ्दै गरेको र विमानसँग ठोक्किएर विस्फोट भएको जस्तो देख्‍न सकिन्छ।
क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि इरान ‘तल पर्‍यो’
इरानसँग ‘बिनासर्त गम्भीर वार्ता गर्न’ अमेरिका तयार
त्यसको १० सेकेन्डपछि जमिनमा ठूलो विस्फोटन भएको आवाज सुन्न सकिन्छ। आगो लागेको उक्त विमान भने उडिरहेको नै देखिन्छ।
बिहीवार बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भने उनलाई उक्त विमानलाई के भएको थियो भन्ने विषयमा केही सन्देह लागेको थियो।
तर बीबीसी संवाददाता पल एडम्सका अनुसार इरानी अधिकारीहरूले पश्चिमा देशको आरोपलाई ‘हास्यास्पद’ भन्दै खण्डन गरेका छन्। त्यसलाई उनीहरूले अमेरिकाको ‘मनोवैज्ञानिक कारबाही’ को अंश भनेका छन्।
कसरी हुँदैछ छानबिन?
तर एक इरानी अधिकारीले रोएटर्स समाचारसंस्थासँग कुरा गर्दै विमान दुर्घटनासम्बन्धी अनुसन्धानमा सहभागी हुन अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा नै आमन्त्रण गरिएको बताएका छन्।
इरानी टेलिभिजनहरूमा दुर्घटनास्थलमा बुलडोजर चलाइएका दृश्यहरू देखाइएको थियो।
युक्रेनका राष्ट्रपतिले बिहीवार चालकदलका सदस्यका परिवारलाई भेटे
रोनाभाइरस: भारतले निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वभरि औषधिको अभाव हुने भय